विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंले ल्याएको सामान विमानस्थलमा जफत हुनसक्छ – DailyHamroNews
२०७५ पुष २५ गते १०:१५ मा प्रकाशित
२५ पुस, काठमाडौं । विदेशबाट नेपाल फर्किंदै हुनुहुन्छ ? फर्किँदा विगतको जस्तै टन्नै सामान ल्याउने योजना छ भने विचार पुर्‍याउनुस् । पछिल्ला दिनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भन्सारमा सामान जाँच कडा बनाएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा विदेशबाट ठूलो परिमाणमा रक्सी ल्याउने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार जाँचमा कडाइ गरिएको विमानस्थल भन्सार प्रमुख चुँडाराज सापकोटाले बताए ।
सरकारको झिटिगुन्टा आदेशअनुसार मात्रै सामान ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन् । झिटीगुन्टा आदेशमा तोकिएको भन्दा बढी सामान ल्याए सीधै जफत गर्न थालिएको छ ।
Previous बानेश्वर क्षेत्रमा ३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गर्दै प्रहरी
Next ‘जनमत पार्टी’ को अध्यक्ष बने सिके राउत स्वतन्त्र मधेस र जनमत संग्रहकाे मुद्दा परित्याग, पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय